မလုံခြုံတော့တဲ့ ခေတ်ကြီးမှ…ာ နေ့ခင်းကြောင်တောင်… တိုက်ခန်း ၄ လွှာတက်လုဖို့ကြံစည် – ရှအေလငျး
မလုံခြုံတော့တဲ့ ခေတ်ကြီးမှ…ာ နေ့ခင်းကြောင်တောင်… တိုက်ခန်း ၄ လွှာတက်လုဖို့ကြံစည်
သူ များပြော လို့ကြားဖူးတာပဲရှိတယ်ခုမှကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့ လူက တုန်နေတာပဲ အရမ်းလန့်ပီး…..
နေ့ လယ် ၃ နာ ရ်ီလောက်က သားအမိနှစ်ယောက်ထဲအိမ်ထဲမှာ ကလေးကလဲအိပ်နေတော့မီးပူထိုင်တိုက်နေရင်းအပြင်ကသံပန်းကိုထုနေတော့ ထွက်ကြည့်တာ ယောကျာင်္းတယောက် အသက်၃၀လောက်ရှိမယ် ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့အကျီအနီနဲ့ ပစ္စည်းလာယူတာတဲ့….
ကိုယ် က လဲ Online Shopping လုပ်နေတာဆိုတော့အထည်လာယူတာပဲထင်တာ ကိုယ့်cusညီမလေးတွေကတခါတလေ သူတို့မအားရင်သူတို့ကောင်လေးတွေလာယူတက်တယ်အာ့နဲ့ဖွင့်ပေးဖို့သော့သွားယူတာ နောက်မှသတိရသွားတယ် အိမ်လာယူမဲ့အထည်တွေက ခုမှအမျိုးသားကကားဂိတ်မှာသွားထုတ်တုန်း အာ့နဲ့သူ့ကိုအထည်ကမရောက်သေးဖူးပြောတာ မသွားသေးပဲနဲ့ ရပ်ပီးသံပန်းကို ဆက်ထုနေတယ် ကိုယ်လဲကြောက်ပီးအိမ်ထဲဝင် ယောကျာင်္းကိုဖုန်းဆက်….
သူ က ဘာမှမကြောက်နဲ့ထွက်ပြော တဲ့ ထပ်လုပ်ရင်ရဲစခန်းဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုပီး ကိုယ်လဲထွက်ပြောရော စောက်စကားမများနဲ့ဖွင့်မှာသာဖွင့်ဆိုပီးသော့ကိုအတင်းဆွဲဖြုတ်နေတာ ကိုယ့်မာကြောက်ပီးအိမ်ထဲပြေးဝင်သားကိုပုခတ်ထဲကထုတ်ပီးအခန်းထဲဝင်နေတာ….
သ တ္တိ ခဲ မမက အနောက်ဖေးကဓားတချောင်းပါ အခန်းထဲယူထားလိုက်သေးတယ် ဝင်လာရင်တော့ထိုးမာဆိုပီး😁😁😁 အာ့နဲ့တအောင့်ကြာတော့လူတက်လာလို့ထင်ပါတယ်ဆင်းသွားပုံရတယ်ကိုယ့်အခန်းကလဲ ၄လွှာမှာ ကိုယ်လဲဘေးခန်းကအန်တီကိုအကူညီတောင်းပီး ကိုယ့်ယောကျာင်္းပြန်မလာမချင်းသူ့အခန်းမှာသွားထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်…..
တကယ်ပါ အရင်နေ့တွေကဆိုမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲ သံပန်းတခါးသော့က်ိုခတ်ချင်မှခတ်တာ… အခန်းတံခါးပဲလော့ချထားတယ် ဒီနေ့မှဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဖူး ယောကျာင်္းအပြင်ထွက်တော့သော့လိုက်ခတ်မိလို့😔😔 အရင်နေ့တွေလိုကသာဆိုရင်အဲ့လူအိမ်ထဲရောက်ပီးဘာတွေဖစ်သွားမလဲစဉ်းတောင်မစဥ်းစားရဲဖူး……
အဲ့လူဆီကအရက်နံ့လဲမရဖူး ဆေးသမားလားမသိဖူးပုံစံကလဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့ 😞 ကိုယ်လဲကြောက်ပီးရင်တွေတုန်နေတာတော်တော်နဲ့မပျောက်ဖူး…..တိုက်ခန်းနဲ့နေတဲ့သူတွေသတိထားကြပါနော် ဖစ်နိုင်ရင်သံပန်းတံခါးသော့ကိုအမြဲခတ်ထားကြပါ…..
မသိတဲ့လူဆိုသေချာမေးမြန်းပီးမှဖွင့်ပေးပါ…. ကိုယ်ကတော့ ပစ္စည်းလာယူမယ်ပြောတာနဲ့ ကိုယ့်အထည်ယူမယ်ထင်ပီးဖွင့်ပေးဖို့လူပ်နေတာ ကံကောင်းလို့ပေါ့….. 😔 အားလုံးသတိထားစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရေးပေးလိူက်ပါတယ်နော်……ခေတ်ြကီးကကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုယ့်အိမ်ထဲကိုယ်နေတာတောင်မလုံ ခြုံတော့ဖူး😢😢
ရန်ကုန်… သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ကပါ
Poe Kay Khaing Oo
သူမြားပွောလို့ကွားဖူးတာပဲရှိတယျခုမှကိုယျတိုငျကွုံရတော့ လူက တုနျနတောပဲ အရမျးလနျ့ပီး…..
နလေ့ယျ၃နာရျီလောကျက သားအမိနှဈယောကျထဲအိမျထဲမှာ ကလေးကလဲအိပျနတေော့မီးပူထိုငျတိုကျနရေငျးအပွငျကသံပနျးကိုထုနတေော့ ထှကျကွညျ့တာ ယောကြာင်ျးတယောကျ အသကျ၃၀လောကျရှိမယျ ဆံပငျကောကျကောကျနဲ့အကြီအနီနဲ့ ပစ်စညျးလာယူတာတဲ့….
ကိုယျကလဲ Online Shopping လုပျနတောဆိုတော့အထညျလာယူတာပဲထငျတာ ကိုယျ့cusညီမလေးတှကေတခါတလေ သူတို့မအားရငျသူတို့ကောငျလေးတှလောယူတကျတယျအာ့နဲ့ဖှငျ့ပေးဖို့သော့သှားယူတာ နောကျမှသတိရသှားတယျ အိမျလာယူမဲ့အထညျတှကေ ခုမှအမြိုးသားကကားဂိတျမှာသှားထုတျတုနျး အာ့နဲ့သူ့ကိုအထညျကမရောကျသေးဖူးပွောတာ မသှားသေးပဲနဲ့ ရပျပီးသံပနျးကို ဆကျထုနတေယျ ကိုယျလဲကွောကျပီးအိမျထဲဝငျ ယောကြာင်ျးကိုဖုနျးဆကျ….
သူကဘာမှမကွောကျနဲ့ထှကျပွော တဲ့ ထပျလုပျရငျရဲစခနျးဖုနျးဆကျလိုကျမယျဆိုပီး ကိုယျလဲထှကျပွောရော စောကျစကားမမြားနဲ့ဖှငျ့မှာသာဖှငျ့ဆိုပီးသော့ကိုအတငျးဆှဲဖွုတျနတော ကိုယျ့မာကွောကျပီးအိမျထဲပွေးဝငျသားကိုပုခတျထဲကထုတျပီးအခနျးထဲဝငျနတော….
သတ်တိခဲမမက အနောကျဖေးကဓားတခြောငျးပါ အခနျးထဲယူထားလိုကျသေးတယျ ဝငျလာရငျတော့ထိုးမာဆိုပီး😁😁😁 အာ့နဲ့တအောငျ့ကွာတော့လူတကျလာလို့ထငျပါတယျဆငျးသှားပုံရတယျကိုယျ့အခနျးကလဲ ၄လှာမှာ ကိုယျလဲဘေးခနျးကအနျတီကိုအကူညီတောငျးပီး ကိုယျ့ယောကြာင်ျးပွနျမလာမခငျြးသူ့အခနျးမှာသှားထိုငျစောငျ့နလေိုကျတယျ…..
တကယျပါ အရငျနတှေ့ကေဆိုမမေ့ပြေ့ောကျပြောကျပဲ သံပနျးတခါးသော့ကျိုခတျခငျြမှခတျတာ… အခနျးတံခါးပဲလော့ခထြားတယျ ဒီနမှေ့ဘာစိတျကူးပေါကျတယျမသိဖူး ယောကြာင်ျးအပွငျထှကျတော့သော့လိုကျခတျမိလို့😔😔 အရငျနတှေ့လေိုကသာဆိုရငျအဲ့လူအိမျထဲရောကျပီးဘာတှဖေဈသှားမလဲစဉျးတောငျမစဥျးစားရဲဖူး……
အဲ့လူဆီကအရကျနံ့လဲမရဖူး ဆေးသမားလားမသိဖူးပုံစံကလဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့ 😞 ကိုယျလဲကွောကျပီးရငျတှတေုနျနတောတျောတျောနဲ့မပြောကျဖူး…..တိုကျခနျးနဲ့နတေဲ့သူတှသေတိထားကွပါနျော ဖဈနိုငျရငျသံပနျးတံခါးသော့ကိုအမွဲခတျထားကွပါ…..
မသိတဲ့လူဆိုသခြောမေးမွနျးပီးမှဖှငျ့ပေးပါ…. ကိုယျကတော့ ပစ်စညျးလာယူမယျပွောတာနဲ့ ကိုယျ့အထညျယူမယျထငျပီးဖှငျ့ပေးဖို့လူပျနတော ကံကောငျးလို့ပေါ့….. 😔 အားလုံးသတိထားစခေငျြတဲ့စိတျနဲ့ရေးပေးလိူကျပါတယျနျော……ခတျွေကီးကကွောကျစရာကောငျးတယျကိုယျ့အိမျထဲကိုယျနတောတောငျမလုံ ခွုံတော့ဖူး😢😢
ရနျကုနျ… သင်ျဃနျးကြှနျး မွို့ကပါ
ကျောက်တောင်ပေါ်က ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့… ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး နှင့် …သံသယ အဖြစ်ရဆုံး …ခင်ပွန်းသည် ၏ ..လုပ်ရပ်
ဒီမနက် လဘ္ကက်ရည်ဆိုင်က အတွေ့အကြုံလေး
အမ်မီနမ်ဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြနေတဲ့အချက်ငါးချက်
ဖြူဖြူကျော်သိန်း ထိုင်ငိုသွားရလောက်အောင် အံ့အားသင့်ဖွယ်စကေးနဲ့ အချစ်မီး...
ခန္ဓာဝန်ချမည့်အချိန်ကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး